Ihlathi lemimoya yomine: ngubani olibhalileyo, lithetha ngantoni | Uncwadi lwangoku
Ihlathi lemimoya yomine
Encarni Arcoya | | Iincwadi
Kunyaka ophelileyo le ncwadi yaqala ukuthengiswa Ihlathi lemimoya yomine, ulwaphulo-mthetho kunye nenoveli eyimfihlakalo ethe ngexesha elifutshane yafumana uhlelo lwesibini. Usenokuba ukhe wayibona kwiivenkile ezithengisa iincwadi kwaye yabamba iliso lakho.
Ukusekwa eCantabria, le ncwadi yenye yezona zinika uninzi lokuthetha ngazo, kodwa ithini malunga neHlathi leMimoya emine? Ibhalwe ngubani? Kutheni le nto kufuneka uyifunde? Siza kukuxelela.
1 Ngubani obhale Ihlathi leMimoya emine
2 Yintoni iHlathi leMimoya emine malunga
3 Obona balinganiswa
4 Ngaba yincwadi eyahlukileyo okanye isaga?
5 Kutheni kufuneka unike amaHlathi eMimoya emine ithuba
Ngubani obhale Ihlathi leMimoya emine
Umthombo: María Oruña
Ihlathi lemimoya yomine ibingayi kuba yincwadi ukuba umbhali uMaría Oruña ebengenalo uluvo. Nangona kunjalo, njengezinye iinoveli ezininzi ezijongana nenxalenye ethile yembali, yayifuna iminyaka eliqela yokubhalwa kwayo yonke into ibotshelelwe kwaye ibotshwe kakuhle. Ngapha koko, ekupheleni kwencwadi umbhali ngokwakhe uxelele ukuba zeziphi iinxalenye eziyinyani (zebali okanye intsomi) kwaye leliphi icandelo eliyinyani, ukuze sifumane umbono wophando olukhulu alwenzileyo.
Kodwa ngubani uMaría Oruña?
UMaría Oruña wazalwa ngo-1976 eVigo. Ungumbhali waseGalician kwaye le ncwadi, Ihlathi leMimoya emine ayisiyo incwadi yakhe yokuqala. Impumelelo enkulu yeza kulo mbhali ehamba ne-Puerto Escondido trilogy yakhe, iincwadi ezintathu ezithe zapapashwa yindlu yokupapasha i-Destino kwaye zaphawula ukuqala kwinoveli yolwaphulo-mthetho, ngempumelelo enkulu kuba yakhawuleza yaguqulelwa kwisiCatalan, eJamani naseSpanish. .
Ihlathi lemimoya emine yinoveli yombhali yamva nje, ayikhuphe ngo-2020, evalelwe ngokupheleleyo, kodwa oko akuzange kumthintele ukuba aphumelele.
Ngoku, ingumbhali nje? Ewe inyani kukuba hayi. Ngokwenene Uqeqesho lwakhe lusemthethweni, kuba uligqwetha. Kodwa oko akuzange kumenze alwele ukuba ngumbhali kunye nomlobi wekholamu. Iminyaka eli-10 wayesebenza njengegqwetha labasebenzi nezorhwebo, kwaye ngo-2013 ngela xesha wayephehlelela incwadi yakhe yokuqala eyazipapashayo, La mano del arquero, eyayithetha ngokuhlukunyezwa emsebenzini kunye nokuxhatshazwa kwegunya. Ngokomlobi, inoveli yayisekwe kumatyala awayewazi ngomsebenzi wakhe.
Yintoni iHlathi leMimoya emine malunga
Kuya kufuneka uyazi malunga neHlathi leMimoya emine elinoveli leyo yenzeka ngamaxesha amabini. Kwelinye icala, elidlulileyo, apho unayo uGqirha Vallejo noMarina, usuku lwabo ngemini ngenkulungwane ye-XNUMX nako konke oko bekuthetha, kokubini indoda nomfazi.
Ngakolunye uhlangothi, unayo, kunye noJon Bécquer, uhlobo lomphandi ozingela ukunyaniseka, okanye akunjalo, kwimbali.
Ibali linqamleza phakathi kwemigca emibini, kuba bonke abalinganiswa basondelelene kakhulu. Kunokuthiwa, nangona inqaku le-nexus kukubulala okudibanisa inkulungwane ye-XNUMX kunye noJon Bécquer namhlanje, njengoko inoveli iqhubeka ubona indlela abalinganiswa abanxulumene kakhulu nemfihlakalo ephambili: ilivo lamakhonkco alithoba.
Ngokweli bali, bekukho amakhonkco alithoba oobhishophu abalithoba ababenamandla omlingo, abakwaziyo ukuphilisa. Kodwa asizukutyhila ngakumbi kuwe ukuze ungafaki into ephuma encwadini.
Sishiya i Isishwankathelo:
Ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX, ugqirha Vallejo wasuka eValladolid waya eGalicia kunye nentombi yakhe uMarina ukuya kusebenza njengogqirha kugqirha omkhulu waseOurense. Apho baya kufumanisa amasiko athile kwaye baya kuba namava okuwa kweCawa. UMarina, unomdla kumayeza nakwibhotani kodwa ngaphandle kwemvume yokufunda, uyokulwa ngokuchasene neendibano ezibeka ixesha lakhe kulwazi nothando kwaye uya kungeniswa kwi-adventure eya kugcina imfihlo ngaphezulu kwewaka leminyaka.
Kumhla wethu, uJon Bécquer, ingcali ngokungaqhelekanga esebenza ngokufumana iziqwenga zembali ezilahlekileyo, uphanda ilivo. Ngokukhawuleza xa eqala uphando, egadini yeemonki endala isidumbu sendoda enxibe umkhuba we-Benedictine weXIX uyavela. Le nyani iya kwenza iBécquer ingene nzulu kumahlathi aseGalicia ifuna iimpendulo kwaye yehle amanyathelo amangalisayo exesha.
Kwihlathi leMimoya emine siza kudibana nabalinganiswa abaninzi kodwa, kukho abathathu kubo, ababonakala ngokuba nelizwi lokucula, okanye ngenxa yokuba umbhali ugxile kubo. Zezi:
Ugqirha Vallejo. Inxulumene nomlinganiswa (ophambili) waseMarina, kuba yile ntombi yakhe. Uluhlu lwexesha lakhe lelakudala, kuba uya kukuxelela ngembali yakhe ekuqaleni kwenkulungwane ye-XNUMX xa wayehlala eGalicia kunye nentombi yakhe ukuya kusebenza njengogqirha kugqirha woonongendi baseOurense.
UMarina. Mhlawumbi ungumlinganiswa oyinyaniso wenoveli. Wafika e-Ourense ngo-1830 kwaye waqala ukuba nomdla kwezonyango (nguyise) nakwibhotani (ziimonki kunye notata wakhe). Ke, iyaphambuka kwinto "yesiqhelo" yomfazi ngelo xesha, nangaphambi koku. Imeko yakhe njengomfazi ithetha ukuba kufuneka alwe nale miqobo imiselweyo.
UJon Bécquer. Ngumlinganiswa osekwe kwenye eyayikho ngokwenene. Kule ncwadi ungumcuphi wobugcisa osemva kwimbali yamasongo alithoba. Abanye bamchaza njenge-Indiana Jones kodwa akathandi ukumthanda ngenxa yobuntu bakhe.
Ngaba yincwadi eyahlukileyo okanye isaga?
Amaxesha amaninzi, ukufunda umbhali omtsha kusinika uloyiko, ngakumbi ngenxa yefashoni yangoku yokukhupha i-bilogies, i-trilogies kunye ne-sagas eyenziwe ziincwadi ezininzi, apho ibali lingapheli.
Ukuba nathi sithathela ingqalelo ukuba ngaphambi koku, uMaría Oruña wakhupha i-trilogy, kuyinto eqhelekileyo ukuba ungathandabuzi ukuba le ncwadi yahlukile okanye yayiyinxalenye yesaga.
Kwaye ngumbhali ngokwakhe okucacisile: a ukuziqukumbela ibali. Oko kukuthi, iqala kwaye iphele kwincwadi enye; ngaphandle ngaphezulu. Oko kwenza ukuba lonke uphando kunye nesakhiwo sigxininiswe kwincwadi enye enokufundwa ngokulula kwiintsuku ezimbalwa (ukuba nje iyakutsala, kunjalo).
Kutheni kufuneka unike amaHlathi eMimoya emine ithuba
Sele uyazi okungakumbi malunga neHlathi leMimoya emine, kodwa mhlawumbi awufuni kuzama okwangoku, okanye awazi ukuba kufanelekile ukuba uyifunde okanye hayi. Kukho izizathu zokuyenza:
Yincwadi eyodwa yokuziqukumbela. Ukuba awuzange umfunde umbhali ngaphambili, ukungena kwi-trilogy kunokuba kakhulu. Kodwa ungayifunda incwadi enesiqalo kunye nesiphelo sokufumanisa ukuba uyayithanda na ipeni yakhe okanye awuthandi.
Imalunga ne- Inxalenye yembali yaseSpain. Amaxesha amaninzi sazi ngakumbi ngembali yamanye amazwe kuneli lethu. Kwaye kulusizi ngokwenene. Ke ukuba ufuna ukwazi ukuba abantu bahlala kanjani kule ndawo yaseSpain ngenkulungwane ye-XNUMX kwaye ufunde malunga nealchemy, ibhotani, amayeza ... ungazama.
La Umfazi unendima ephambili kwinoveli. Kwaye sithetha ngenkulungwane yeshumi elinesithoba, kodwa siza kubona ukuba lo mfazi ulapha uzingqina njani ngendlela ebalaseleyo.
Ukhe wayifunda iHlathi leMimoya emine? Ucinga ntoni ngaye?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Ihlathi lemimoya yomine